"ပြောပြရင် နားလည်ပါတယ်" ဝန်ကြီးချုပ် လုပ်ကြံမခံရခင်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ စကားရဲ့ အဓိပ္ပာယ် - JAPO Japanese News
“ပြောပြရင် နားလည်ပါတယ်” ဝန်ကြီးချုပ် လုပ်ကြံမခံရခင်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ စကားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
ဂါ 21 Jun 2022, 19:07 ညနေ
ဆာမူရိုင်းခေတ်ကုန်သွားပြီး ခေတ်မှီလာတဲ့ ဂျပန်
ဒါပေမယ့်လည်း သေနတ်ကိုင်စစ်ဖြစ်တဲ့ခေတ်ကို ကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီအချိန် Takeshi Inuyo ဟာ အသက် 76 နှစ်ဖြစ်ပြီး 1931 ခုနှစ်မှာ ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
သူ့မူဝါဒက အခြေခံဥပဒေ နိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံရေးကို မှန်ကန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန် စိတ်ကူးရှိသော်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဂျပန်စီးပွားရေးသည် ယိုယွင်းလာပြီး စစ်တပ်ကို ဗဟိုပြုကာ နိုင်ငံရေးကနေ ဖောက်ထွက်ရာကနေ စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်
စစ်တပ်က ဂျပန်ကို အုပ်ချုပ်ရင် စည်းမျဥ်းအတိုင်း လိုက်နာတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်မရတော့မှာကို Inuyo ကစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်
စစ်တပ်၏သတင်းကြောင့် ဂျပန်ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက စစ်ပွဲစတင်ပြီဖြစ်တာကို သိလာတဲ့ကြားကနေ၊ Inuyo စစ်ပွဲကို ရပ်တန့်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်
ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ကြားက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ခဲ့တာပါ
မေ ၁၅၊ ၁၉၃၂ ခုနှစ်
စစ်သားငယ်များစွာသည် ပစ္စတိုသေနတ်များကို ကိုင်ဆောင်ကာ Inuyo ၏အိမ်ပေါ်သို့ တက်ခဲ့ကြပါတယ်
သေနတ်နဲ့ပစ်ပေမယ့်လည်း အံ့ဩဖွယ်ပစ်မရ ဖြစ်နေခဲ့ပုံပါပဲ
ဒီလို အရေးတကြီး အခြေအနေမျိုးမှာတောင် ဆွေးနွေးဖြေရှင်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး အယူအဆကိုကိုင်ဆောင်ပြီး၊ “話し合いをしよう、話せばわかる” “ဆွေးနွေးကြရအောင်၊ ပြောရင် နားလည်ပါတယ်” လို့ စစ်သားငယ်လေးတွေကို အခန်းထဲကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်
သူ့အတွေးအမြင်နဲ့ အခုကစပြီး ဂျပန်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ပြောမလို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ နောက်မှ အပြေးရောက်လာတဲ့စစ်သားက ပစ်လိုက်ရာကနေ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေရောက်ကာမှပဲ အစေခံတွေ ရောက်လာပါတော့တယ်
ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရနေသော်လည်း Inukai က “ပစ်လိုက်တဲ့သူနဲ့ စကားပြောချင်လို့ ခေါ်ခဲ့ပေးပါဦး။ ပြောပြရင် နားလည်ပါတယ်”
ဒီဖြစ်ရပ်ကနေ စစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်ရင် သတ်ပစ်မှာကို ကြောက်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက စစ်တိုက်ဖို့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်
Inuyotake ဟာဆွေးနွေးမှု၏ အရေးကြီးပုံကို အဆုံးထိ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်
သူ့လို နိုင်ငံရေးသမား တွေ ပိုများလာရင် ဂျပန်က စစ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
ယခုပင်လျှင် တစ်ကမ္ဘာလုံး တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာ ဖြစ်နေပါပြီ
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ မလိုအပ်ဘူးလား?
ရုရှားက ဆိုးဝါးတယ်? ဂျပန်တွေကို မုန်းတယ်? တရုတ်တွေက စိတ်ပျက်စရာပဲ?
ထင်တာမြင်တာပြောတတ်ကြတာများပေမယ့်၊ အားလုံးပဲ ပြောကြည့်ရင် နားလည်ကြမှာမို့ ဆွေးနွေးကြည့်ကြပါလား?
မာနကြီးလွန်းလို့ အထီးကျန်စွာ သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ Ono no Komachi ရဲ့ အံ့မခန်းဘဝ
ဂျပန်နံပါတ်တစ် လက်အိတ်လုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
ရွှေဒင်္ဂါးပြားကနေ ရွှေကိုနုတ်ပြီး ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးပညာရှင်။ (သူ့၏ဗျူဟာမှာ လူချမ်းသာများကို အရှုံးပေါ်စေခဲ့။)
ရှုံးနိမ့်သူကို ဖေးမပါ။ ရှုံးသွားသူကို လှောင်ပြောင်သူ ဆာမူရိုင်းကို အသက်နဲ့ရင်းပြီး လမ်းညွှန်သင်ပြတဲ့ အမျိုးသား